ဇယားထိပ်ရောက်ရှိဖို့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေ ဘယ်လောက်စောင့်ခဲ့ရလဲ? - Shwe Soccer
ဇယားထိပ်ရောက်ရှိဖို့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေ ဘယ်လောက်စောင့်ခဲ့ရလဲ?
ပရီးမီယားလိဂ်ချန်ပီယံဆိုတဲ့နာမည်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အတော်လေးဩဇာကြီးမားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှု့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဂုဏ်သိက္ခာတစ်ခုအတက် (၃၈)ပွဲကစားရတဲ့အကြမ်းတမ်းဆုံးလိဂ်မှာ သွေးနဲချွေး ပေးဆပ်ပြီးမှ ရလာတဲ့ ဒီနာမည်လေးကချိမြိန်သလောက် နောက်ကွယ်မှာ ခါးစည်းခံခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်များစွာများရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်နေတဲ့လီဗာပူးလ်ဆိုရင် ယယလက်ရှိလူတိုင်းပါးစပ်ဖျားမှာစွဲနေတဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်လေးအတွက် လက်မတင်လေးအလွတ်ခံလိုက်ရတာအပါဝင် နှစ်(၃၀) တိတိစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါ။
လီဗာပူးလ်ဟာ သူတိုရဲ့အမှတ်ပေးဖလားပြန်ရယူဖို့နှစ်(၃၀) တိတိစောင့်ခဲ့ရသလိုဇယားထိပ် အဆင့်တစ်ကနေ အတော်တန်ဝေးကွာနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘဝကြီးဟာ ‌အရိပ်လိုချင် နေပူထဲကစောင့်ခိုင်းတာပဲမဟုတ်လား အရေးကြီးတာ ဘယ်အချိန် နေပူထဲနေရမလည်းသိဖို့ပဲဖြစိပါလိမ့်မယ်။ ယမန်နေ့က ဘန်လေကိုအနိုင်ယူပြီးအဆင့်တစ်ကိုသုံးမှတ်အသာနဲ့တက်လှမ်းသွားတဲ့မန်ယူနိုက်တဒ် ဟာ ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ (၇) နှစ်နီးပါးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။၂၀၁၃ မှာ ဖာဂီ နဲ့အတူ အကြိမ်မြောက်ချန်ပီယံအဖြစ် ဗိုလ်ဝင်ခံပြီးနောက် မန်ယူနိုက်တဒ်အတွက် ဒီနေရာကို မရောက်တော့တာက ရက်ပေါင်း (၈၈၇)ရက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေရာလေးတစ်ခုအတွက်တောင် မန်ယူနိုက်တဒ်ဟာ ရက်ပေါင်း(၈၈၇)ရက်စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်(၁၃) ကြိမ်ရထားတဲ့ အဂ်လန်ရဲ့ပြည်တွင်ူအကောင်းဆုံးအသင်းဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ယူနိုက်တဒ်အောက်မှာတော့ လန်ဒန်ထိပ်သီး ချဲလ်ဆီးကလည်း အဆင့်တစ်ကို ရောက်ဖို့ (၈၄၅)ရက်တိုင် စောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဘတစ်ကိုမရောက်သေးရင် ရက်တွေကရေတွက်နေမှာဖြစ်ပြီး မန်စီးတီးကတော့ (၅၁၆)ရက်ရှိနေပါပြီ။ အာဆင်နယ်ကတော့ (၁၁၇)ရက်သာရှိပါသေးတယ်။ အာဆင်နယ် ရဲ့ နာမည်စာလုံးဟာ A နဲ့စသလို ဒုတိယစားလူံးက လည်း R ဖြစ်လို့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တစ်မကန်ခင်ရင် ဆိုရင် စာလုံးစဉ်အရ အဆင့်တစ်မှာပဲ ရှိနေလို့ အခုလိုရက်နည်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားက ၂၀၀၄ ကရရှိခဲ့တာပါ။အဲဗာတန် (၇၅)ရက်၊ဆောက်တပ်တန်(၆၇)ရက်၊လက်စတာ(၅၄)ရက်၊တော့တင်ဟမ်(၂၉)ရက် နဲ့ လီဗာပူးလ်ကတော့ ယမန်နေ့က မန်ယူနိုက်တဒ် ကျော်တက်ခံရခြင်းနဲ့အတူ အဆင့်တစ်နဲ့တစ်ရက်ဝေးကွာသွားပါတယ်။ အကယ်လို့ ယခုတစ်ပတ်မှာကစားမယ့် အန်ဖီးလ်ပွဲမှာယူနိုက်တဒ်ကို အနိုင်ရရင် လီဗာပူးလ်က အမှတ်တူဂိူးကွာနဲ့အဆင့် (၁)ကိုသိမ်းနိုင်ပေမယ့် သရေကျတာ၊ရှုံးတာဆိုရင်ဝောာ့တစ်နဲ့ဝေးကွာမယ့် နေ့ရက်တွေက ပိုမိုများပြားလာဦးမှာပါပဲ။လက်ရှိအသင်း(၂၀) အတွင်းမှာတော့ ဘရိုက်တန် က တစ်ကြိမ်မှ အဆင့်တစ်ကိုမရောက်ဖူးသလို လက်ရှိနာမည်ကြီးဝုဗ်ကအဆင့်တစ်ကိုရောက်ဖူးတာက ရက်ပေါင်း(၂၁၂၈၅)ရက်ရှ်ိနေခဲ့ပါပြီ။
ပရီးမီယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆိုတဲ့နာမည္က ကမၻာေပၚမွာ အေတာ္ေလးဩဇာႀကီးမားတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ႔တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုဂုဏ္သိကၡာတစ္ခုအတက္ (၃၈)ပြဲကစားရတဲ့အၾကမ္းတမ္းဆုံးလိဂ္မွာ ေသြးနဲေခၽြး ေပးဆပ္ၿပီးမွ ရလာတဲ့ ဒီနာမည္ေလးကခ်ိၿမိန္သေလာက္ ေနာက္ကြယ္မွာ ခါးစည္းခံခဲ့ရတဲ့ေန႔ရက္မ်ားစြာမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိခ်န္ပီယံျဖစ္ေနတဲ့လီဗာပူးလ္ဆိုရင္ ယယလက္ရွိလူတိုင္းပါးစပ္ဖ်ားမွာစြဲေနတဲ့ လက္ရွိခ်န္ပီယံ ဆိုတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္ေလးအတြက္ လက္မတင္ေလးအလြတ္ခံလိုက္ရတာအပါဝင္ ႏွစ္(၃၀) တိတိေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရတာပါ။
လီဗာပူးလ္ဟာ သူတိုရဲ့အမွတ္ေပးဖလားျပန္ရယူဖို႔ႏွစ္(၃၀) တိတိေစာင့္ခဲ့ရသလိုဇယားထိပ္ အဆင့္တစ္ကေန အေတာ္တန္ေဝးကြာေနသူေတြလည္းရွိပါတယ္။ဘဝႀကီးဟာ ‌အရိပ္လိုခ်င္ ေနပူထဲကေစာင့္ခိုင္းတာပဲမဟုတ္လား အေရးႀကီးတာ ဘယ္အခ်ိန္ ေနပူထဲေနရမလည္းသိဖို႔ပဲျဖစိပါလိမ့္မယ္။ ယမန္ေန႔က ဘန္ေလကိုအနိုင္ယူၿပီးအဆင့္တစ္ကိုသုံးမွတ္အသာနဲ႔တက္လွမ္းသြားတဲ့မန္ယူနိုက္တဒ္ ဟာ ဒီေနရာကိုေရာက္ဖို႔ (၇) ႏွစ္နီးပါးေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။၂၀၁၃ မွာ ဖာဂီ နဲ႔အတူ အႀကိမ္ေျမာက္ခ်န္ပီယံအျဖစ္ ဗိုလ္ဝင္ခံၿပီးေနာက္ မန္ယူနိုက္တဒ္အတြက္ ဒီေနရာကို မေရာက္ေတာ့တာက ရက္ေပါင္း (၈၈၇)ရက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေနရာေလးတစ္ခုအတြက္ေတာင္ မန္ယူနိုက္တဒ္ဟာ ရက္ေပါင္း(၈၈၇)ရက္ေစာင့္ခဲ့ရပါတယ္။
ဒီအသင္းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္(၁၃) ႀကိမ္ရထားတဲ့ အဂ္လန္ရဲ့ျပည္တြင္ူအေကာင္းဆုံးအသင္းဆိုလည္းမမွားပါဘူး။ယူနိုက္တဒ္ေအာက္မွာေတာ့ လန္ဒန္ထိပ္သီး ခ်ဲလ္ဆီးကလည္း အဆင့္တစ္ကို ေရာက္ဖို႔ (၈၄၅)ရက္တိုင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရပါတယ္။ဆက္လက္ၿပီးဘတစ္ကိုမေရာက္ေသးရင္ ရက္ေတြကေရတြက္ေနမွာျဖစ္ၿပီး မန္စီးတီးကေတာ့ (၅၁၆)ရက္ရွိေနပါၿပီ။ အာဆင္နယ္ကေတာ့ (၁၁၇)ရက္သာရွိပါေသးတယ္။ အာဆင္နယ္ ရဲ့ နာမည္စာလုံးဟာ A နဲ႔စသလို ဒုတိယစားလူံးက လည္း R ျဖစ္လို႔ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္တစ္မကန္ခင္ရင္ ဆိုရင္ စာလုံးစဥ္အရ အဆင့္တစ္မွာပဲ ရွိေနလို႔ အခုလိုရက္နည္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ရဲ့ေနာက္ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ္ဖလားက ၂၀၀၄ ကရရွိခဲ့တာပါ။အဲဗာတန္ (၇၅)ရက္၊ေဆာက္တပ္တန္(၆၇)ရက္၊လက္စတာ(၅၄)ရက္၊ေတာ့တင္ဟမ္(၂၉)ရက္ နဲ႔ လီဗာပူးလ္ကေတာ့ ယမန္ေန႔က မန္ယူနိုက္တဒ္ ေက်ာ္တက္ခံရျခင္းနဲ႔အတူ အဆင့္တစ္နဲ႔တစ္ရက္ေဝးကြာသြားပါတယ္။ အကယ္လို႔ ယခုတစ္ပတ္မွာကစားမယ့္ အန္ဖီးလ္ပြဲမွာယူနိုက္တဒ္ကို အနိုင္ရရင္ လီဗာပူးလ္က အမွတ္တူဂိူးကြာနဲ႔အဆင့္ (၁)ကိုသိမ္းနိုင္ေပမယ့္ သေရက်တာ၊ရႈံးတာဆိုရင္ေဝာာ့တစ္နဲ႔ေဝးကြာမယ့္ ေန႔ရက္ေတြက ပိုမိုမ်ားျပားလာဦးမွာပါပဲ။လက္ရွိအသင္း(၂၀) အတြင္းမွာေတာ့ ဘရိုက္တန္ က တစ္ႀကိမ္မွ အဆင့္တစ္ကိုမေရာက္ဖူးသလို လက္ရွိနာမည္ႀကီးဝုဗ္ကအဆင့္တစ္ကိုေရာက္ဖူးတာက ရက္ေပါင္း(၂၁၂၈၅)ရက္ရွ္ိေနခဲ့ပါၿပီ။
Previous Article ဆာလာပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ လိုက်ဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ ဖာဘင်ဟို
Next Article ၃ ပွဲသာ ကိုင်တွယ်ပြီးချိန်မှာ ဆုဖလားတစ်လုံးစတင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပိုချက်တီနို